Somali / Wargalinta miisaaniyadda ee ku saabsan doorashada iyo maalmaha fasaxgalinta (Budget Furloug
Waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan ugu noqon lahayn dugsiyada August 17keeda, anaga oo leh kala-doorashada barashada fasalka dhexdiisa ama khadaka tooska ah ee internedka, maadaama aan sidoo kale la socono xaaladaha COVID-19 iyo hagista laga helayo hay'adaha waxbarashada iyo caafimaadka hadii ay dhacdo in lagu noqdo waxbarashada dhammaystiran ee xaga internedka wakhti kasta ee loo baahdo inta lagu jiro sanad dugsiyeedka.
Sida aan u sii qorsheynayno dib-u-bilaw nabdoon ee dugsiyada, waxaan sidoo kale ka shaqeyneynaa sidii aan wax uga qaban lahayn caqabado miisaaniyadeed oo muhiim ah oo deg-deg ah oo soo foodsaaray degmada .
Sanadka soo socda, Iskoolada Degmada cherry Creek waxey la kulimi doonaan hoos u dhac miisaaniyadeed oo gaaraya ila $ 60 milyan, taas oo ay sabab u tahay qeyb ka mid ah dhimista dhaqaalaha oo aan horay loo arag ee maalgelinta waxbarashada gobolka iyo sidoo kale kharashaadka la xiriira masiibada COVID-19.
Maanta, waxaan idiin hayaa wargalin muhiim oo aan idinla wadaagi doono oo ku saabsan qorshayaasheena sidii wax looga qabanlahaa xiisada xaga miisaaniyada.
Talaabooyinka ugu horeeya ee aan qaadnay degmo ahaan waxa ka mid ah in aan galino lix (6) maalmood oo fasax lacag la’aan ah macalimiinta, maamulayaasha, kalkaaliyayaasha caafimaadka, caafimaadka maskaxda iyo shaqaalaha kale si aan u kaydsano $ 12 milyan. Kaydkan halka-mar ah wax kama dhimayo khasaaraha gaaraya $ 60 milyan, laakiin waxay noo ogolaaneysaa inaan iska ilaalno shaqo-joojin degdeg ah. Gudiga waxbarashadu waxay ansixiyeen maalmaha fasaxgalinta ah kulankoodii fiidnimo ee Isniinta.
Maalaha fasaxgalinta waa maalin ay shaqaaluhu shaqeyn doonin oo aan mushaharna la siin doonin. sedex (3) maalmood oo kaliya yaa saameyn ku yeelan doonta barashada ardayda, taasoo keeni karta seddex maalmood oo fasax dheeraad ah oo loogu talagalay ardayda.
Maalmaha soo socdaa waxay noqon doonaan maalmo fasax ah oo ardayda, aaney lahayn fasallo iyo xanaano maalmeed:
Isniin, November 23 (AsbuucaThanksgiving)
Talaado, November 24 (Asbuuca Thanksgiving)
Talaado, January 5 (Maalinta ugu dambeysa ee fasaxa wintarka)
Marka lagu daro maalmaha fasaxgalinta ee bisha November, ma jiri doono iskool dhamaan usbuuca Thanksgiving-ka ee sanad dugsiyeedka 2020-2021. Degmadu waxay wali bixin doontaa waqtiyada waxbarasho ee looga baahan Waaxda Waxabarashada ee Colorado. Waxaad ka heli kartaa jadwalka oo dhamaystiran bogayna internetka: https://www.cherrycreekschools.org/cms/lib/CO50000184/Centricity/Domain/4/SY2020-21%20CCSD%20Parent%20Calendar%20with%20Three%20Furlough%20Days.pdf
Debaajiga-bonka iyo Doorashada Miisaaniyada
Talaabo kale oo muhiim ah oo wax looga qabanayo xiisada miisaaniyadeena, Gudiga Waxbarashada yaa habeenkii Isniinta waxay heleen soo-jeedintii Kormeeraha guud si ay u go’aamiyaan deebaajiga-bonka iyo doorashada miisaaniyada. Khaas ahaan, talo soo jeedinta yaa ah in miisaaniyada doorashada lagu soo qaado $ 35 milyan oo loogu talo galay kharashaadka hawlgalka si loo joojiyo saamaynta ugu xun ee ay ku yeelan karto miisaaniyada, iyo $ 150 milyan oo ku saabsan doorashada debaajiga- bonka ah oo ay kujirto kharashaadka dib-loogu dhigayo, casriyeynta amniga, cusboonaysiinta diiradda lagu saarayo hal abuurka Dugsiyo sare, xarun lagu daweeyo caafimaadka maskaxda, iyo suuragalnimada dugsi cusub oo laga dhisi doono qaybta bari ee degmada si loo yareyo ciriiriga.
Taladan yaa ugu dambayntii waxay ka timid Gudida Miisaaniyada iyo Golaha Guurtida, iyo laba gudiyo mutadawiciin ah oo ka kooban waalidiinta, macalimiinta, maamulayaasha, shaqaalaha degmada, ardayda iyo xubnaha bulshada oo qaatay bilo badan oo ay kulmeen waxayna ka wada hadlayeen dhimista suurtagalnimada iyo ilaha cusub ee dakhliga. Saamaynta isku-dhafka ah ee talooyinka ku saabsan mulkiileyaasha guryaha oo canshuurtoodu ay kor u kici karto $ 1.65 bishii kasta oo ah $ 100,000 ee qiimaha guriga ah. Guddigu waxay u codeyn doonaan kulankooda 3-da August bal in la isugu yeero doorashada iyo in kale.
Waxaan uruurineynaa oo aan lafagurineynaa jawaab celinta aan ka helnay sahanka miisaaniyada ee aan dirnay usbuucii lasoo dhaafay waxaana natiijooyinka aan la wadaagi doonnaa bulshadeena. In kasta oo xaaladda miisaaniyadeena ay liidato, waxaan ku kalsoonahay inaan ka wada shaqeyn karno bulsho ahaan sidii aan u heli lahayn dariiqa horay loogu marin karo dhamaan ardaydeena oo leh waxbarasho wanaagsan iyo mustaqbal fiican.
La soco wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan miisaaniyadeena Qorsheynta boga miisaaniyada mustaqbalka iyo sidoo kale wargalin ku saabsan qorshaheena sidii dib-loogu-bilaabi lahaa dugsiyada August ee qorsheynta mustaqbalka 2020-2021 boga bilowga dugsiga Si aad u tarjumato boga shabakada, isticmaal xulashada luuqada liiska tarjumaada ee barta madow. Fadlan la xiriir Omar Nur cinwaanka emaylka: onur2@cherrycreekschools.org si aad u hesho macluumaad ku qoran luqadaada.
Waxaan idiin rajeynaynaa xagaa-summer wanaagsan oo nasasho leh.